Saka iwe une yako yemagariro midhiya kuvepo uye kumhanya. Iwe uri kuwedzera mafeni uye vateveri nezuva uye kuwana runyerekupe rwevashanyi kune yako saiti. Zvemagariro midhiya zviri kukupa iwe kukura, asi iwe hausi kuona kudzoka pane investment iyo yese yemagariro midhiya gurus iri kutaura nezvayo. Zvemagariro venhau zvinoita kunge iyi neti hombe, asi hausi kubata chero chinhu nekuti munhu wese ari kutsvedza nemumaburi.
Kuwana fan kana muteveri ku wedzera meseji yako kunetiweki yavo. Yako yekutanga network ine simba, asi haina kuita senge yekuwana izwi-remuromo muromo kubva kune ye fan fan.
Janrain Engage inovhara mukaha mune zvese izvi zviitiko, ichipa saiti yako nzira yepasirese yekutora data remushandisi, uye nekupa chikuva chekugovana kuti zvive nyore kukwidziridzwa kwemeseji yako kunetiweki dzevateveri vako. Fungidzira uchikwanisa kutora iyo email kero yemunhu wese anobata neyako brand munharaunda, kuti iwe ugone kukura yako email rondedzero uye kusundira zvimwe zvinopihwa kune avo vanopinda-mukati!
Janrain Engage is a turnkey solution iyo inopa vashandisi kunyoresa kana kusaina pane yako saiti neakaundi kubva kune imwe ye25 + social network uye email vanopa, kusanganisira Facebook, Google, Twitter uye Yahoo!. Ita nyore kunyoreswa, kubvisa kudiwa kwevashandisi kurangarira mapassword uye kuwana data rakapfuma rezita kubva kune yemushandisi social network account nemvumo.